September 21, 2019 »
यी राशि भएका यु’वती हरु लाइ आफ्नो घरको श्रीमती अथवा बु’हारी बनाउदा घरलाई बनाउछन स्वर्ग जानिराखौ ! ज्यो’तिष विज्ञा’नमा हामी जो को’ही धेरै विश्वास वि’श्वास गर्छौ । हु’न पनि हो, ज्यो’तिष विज्ञान भने’को हाम्रो मानव जी’वनमा जो’डिएको एक शास्त्र हो । ज्यो’तिष शा’स्त्रले भनेका र भवि’ष्यवाणी गरेका क’तिपय’कुराहरू मिलि’रहेका छन् । यस्तै मध्य एक राशि अनु’सारको व्यव’हारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ । मानि’सका फरक फरक राशि अनुसार उसको व्य’वहार फरक हुने गर्दछ । वि’वाहको सम्बन्ध’मा पनि राशि अनुसार नै वैवाहिक सम्ब’न्ध र परिवा’रको निर्धा’रण रहने गर्दछ । ज्यो’तिष शास्त्र’का…
कहिल्लै हार नमानी आफ्नो भाग्य आफै बदल्ने यी राशि भएका व्यक्तिहरु जानिराखौ ! शा’स्त्रका अ’नुसार सबै गरी रा’शिहरू १२ वटा मात्र हुन्छ’न् । वि’श्वमा रहेका सम्पू’र्ण मा’निसहरूको रा’शि अनुसार उनीह’रूको भाग्य, क्षम’ता र व्य’वहार फरक फरक हुने गर्दछ । त्यसै’मा पनि को’हीको बौधि’क क्ष’मता धेरै हुन्छ भने कसै’को क’म पनि हुन्छ । ज्यो’तिष शास्त्र’का अनु’सार हरेक फर’क राशि’का व्यक्ति’मा व्य’वहार, भा’ग्य फर’क हुन्छ । केही यस्ता ५ राशि’हरू छन् जुन राशि भए’का मानिस जीव’नमा क’हिले हार मा’न्दैनन् । उ’निहरू आ’फ्नो जीवन बाट क’हिले पनि हार खा’दैनन् र आफ्नो लक्षको लागी…
काठमाडौँ- यी ३ रासी भएका महिलाहरु जुन पुरुष लाइ पाउनको लागि धेरै नै जोड गर्दछन हेरौ ति रासिहरु ज्यो’तिष शा’स्त्रका अनुसार यस्ता केही रा’शिहरू पनि छन् जुन राशि भ’एका पु’रुषहरू प्रति म’हिलाहरू धेरै नै आ’कर्षित हुन्छन् । धेरै ज’सो यु’वतीहरूको आफ्नो उमेर प’रिपक्व भै’सकेपछी आफ्नो जीवन सा’थीको बारेमा हर समय सो’च्ने गर्दछन् । कि धेरै मा’या गर्ने असल जी’वन साथी परोस् । यसो त के’टाहरूले नसोच्ने भन्ने’ पनि होइन । केटाहरूले पनि आफ्नो जीव’नमा एउटा दुख सुखमा साथ दिने राम्री श्री’मती परोस् भन्ने कुरा सो’चिरहेका हुन्छन् ।ज्योतिष शास्त्र’का अनुसार आज…
यी पाच रासी भएका श्रीमतीहरु जसले आफ्नो श्रीमान लाइ आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य बनाउछन जानिराखौ ! शा’स्त्रका अ’नुसार फरक फ’रक मान्छे पछि मान्छे’को स्व’भाव पनि फर’क फरक रहेको हुन्छ । वि’वाह प’छि श्री’मान श्री’मतीको बिच कस्तो स’म्बन्ध हुन्छ भन्ने चा’सो धेरै’को मन’मा रहेको हुन्छ । वि”वाह पछि कसै कसैको स’म्बन्ध नटिक्ने, सम्ब’न्धमा फित’लो आउने हुन्छ भने क’सैको जीवनभर टि’क्ने गर्दछ । सम्ब’न्ध कस्तो ब’नाउने भन्ने श्रीमा’न् श्री’मतीले एक अर्का प्रति देखा’उने जवा’फदेहीता मा भर पर्छ । केही श्री’मतीहरू आफ्नो श्री’मानलाई धेरै मा’या गर्ने हुन्छन् भने कोही श्रीम’ती पतिलाई नि’यन्त्रणमा ल्याउन…
यी ब’लियुड क’लाकार जसको नेपाल संग गहिरो साइनो रहेको छ जानिराखौ ! ब’लिउड क’लाकार हरू जुन भा’रत का भएता पनि ने’पाल सँग सा’इनो रहेका क’लाकार हरू को बा’रेमा चर्चा गर्दै छौ । ने’पालीहरू लाई भा’रतीय क’लाकार अर्थात् ब’लियुडका क’लाकारहरू धे’रै नै मन पर्दछ ब’लिउड कलाकार हरूका ने’पालमा पनि धेरै फ्या’नहरू रहेका छन् । त्यति मात्र हैन केही ब’लिउड कला’कारको ने’पाल सँग साइनो समेत गाँ’सिएको छ त्यसैले पनि नेपा’लीहरूलाई ब’लिउड भने’पछि जा’न्ने’ इच्या रहन्छ । केही भा’रतीय ब’लिउड क’लाकारहरू जसको नेपाल सँग पारस्प’रिक स’म्बन्ध रहेको छ । ती क’लाकार हरू हुन्…
यी हुन् कहिल्लै हातमा पैसा न’टिक्ने रासिहरु जानिराखौ शास्त्र भन्छ यस्ता व्यक्तिहरुको हा’तमा कहिले पनि टिक्दैन पैसा जानिराखौ ! सा’स्त्रका अनुसार यस्ता व्य’क्तिको हा’तमा कहिले पनि पै’सा टि’क्दैन जानिराखौ : शा’स्त्र मा लेखिए अनुसार हाम्रो सा’रिर मा हुने कोठी को धेरै नै म’हत्व रहन्छ हा’मीले जति पै’सा क’माएपनि हाम्रो यी अंग ह’रुमा को’ठी छ भने हा’म्रो हातमा पैसा टिक्दैन स’मुन्द्र शास्त्र का अनुसार हाम्रो स’रिरमा हुने को’ठीहरुले सबै ठाउ ठाउ बाट फ’रक अर्थ दिई राखेका हु’न्छन सबै को’ठीहरुको छु’ट्टाछुट्टै महत्व छ ! हेरौ ति रासिहरु क’तिपय भा’गमा हुने कोठी ले…
हाम्रो सरिरमा भएको को’ठीको अ’र्थ के हो .? थाहा पाउनुहोस् सबै सरिरको सबै अंगमा भएको को’ठीको बारेमा
काठमान्डू :हाम्रो सरिरमा भएको को’ठीको अ’र्थ के हो .? थाहा पाउनुहोस् सबै सरिरको सबै अंगमा भएको को’ठीको बारेमा मा’निसको सरिर मा को’ठी अर्थात का’लो थो’प्लो आउनु स्वा’भाविक नै हो सबै को त भन्न स’किन्न तर धे’रै जसो को मा’नव स’रिर मा १-२ ठाउ मा को’ठी देख्न पाइन्छ जस्तै मु’ख ओठ हात हत्के’ला गाला निधा’र , पाखुरा खु’ट्टा हरुमा कोठी आए’को देख्न सकिन्छ ! वि’शेषगरी मानिस को स’रिर को अनु’हार मा धेरै कोठी’हरू आ’एको देख्न पा’इन्छ कोठी एक प्राकृ’तिक प्रक्रिया हो यो आफै आउने ग’र्छ सुन्दर अनु’हारमा कालो दाग आ’उदा सु’न्दरता…